Baaritaanada luuqadaha ee laanta socdaalka oo qalad ka buuxaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 12 november 2014 kl 15.22
- Warbaxinada baaritaanada luuqadaha haddii loo isticmaalayo dib ugu celinta ruuxa meel ay suurtogla tahay in la dilo, la kufsado, la naafeeyo iwm, markas anniga qareen ahaan waxaa ii muhiim ah in aan kontorooli karo aqoonta iyo awooda xirfaded ee ruuxa baaritaanka luuqadeed sameeyey, waayo waxaa ku jirta danta ruuxa aan matalo, ayuu yeri qareen Byron Törnström.
- 20 daqiiqo oo wareysi telefoon ah kuma filna, waxay u baahan tahay ugu yaraan 10 kulan iyo wareyso, si go’aanka sax ah loo gaaro, ayuu yeri Ferhad shakely.
- Ma u maleynayo in uu wado yaqaan sideedda lahjadood ee af-soomaaliga ee uu sheegtay. Taas waxaa sameyn karo keliya ruuxa maxkaxdiisa xad dhaaftahay, ayuu yeri Barafesor Abdalla Omar Mansuur oo wax ka dhiga jaamacad ku taala Rooma dalka talyaaniga.
- Guud ahaan waxey tan muujineysaa sida ay u dhib badan tahay arrintan. Dabcan haddii baare luuqadeed uu si ku talogal ah u siiyey macluumaad qalad ah annaga iyo shirkada Sprakab, uusanna laheyn awoodda xirfadeed ee uu sheegtay, taas waxay qatar ku tahay amniga garsoorka. Waxaanse annaga ka duulnaa in ruuxa sameynaya baaritaanka luuqadeed in uu leeyahay awooda xirfadeed ee aan heshiiska kula galnay shirkadda.